एक इमान्दार रिक्सा चालकले गरे भेटेको ७ लाख फिर्ता , मानवता अझै सकिएको छैन , दाईलाई सलाम - Nepali in Australia
एक इमान्दार रिक्सा चालकले गरे भेटेको ७ लाख फिर्ता , मानवता अझै सकिएको छैन , दाईलाई सलाम
July 3, 2021 autherLeaveaComment on एक इमान्दार रिक्सा चालकले गरे भेटेको ७ लाख फिर्ता , मानवता अझै सकिएको छैन , दाईलाई सलाम
इमान्दार रिक्सा चालकले गरे ७ लाख फिर्ता ! विदेशबाट कमाएर ल्याएको १ नेपालीको पैसा नेपालगंजमा रिक्साामा छुटेको थियो ! रिक्सा चालकले भेटेपछि पैसा पुलिसलाई जिम्मा लगाएका छन् ! सम्मान स्वोरुप वहाको लागि १ सेएर अवस्य गर्नुहोला !
आजकालको समयमा मान्छेहरु धन प्राप्तिको लागि जति सम्म पनि जाने गर्छन , तर धन नै सबै थोक होईन भन्ने कुरा आज यी इमान्दार रिक्सा चालक दाईले प्रमाणित गरिदिएका छन् ! आफ्नो काम प्रति इमान्दार भएर जिन्दगीमा अगाडी बढ्दा जति खुसि मिल्छ त्यो अरुको छल कपट गरेर कामाएको पैसाले कहिले पनि मिल्दैन !
वहाको घरमा आर्थिक समस्या थियो होला तर पनि अरुको सम्पति जसरि फिर्ता गरे ,त्यो काम प्रति हामी सबैले वहालाई तारिफ गर्ने पर्ने हुन्छ !
आज देशका यी क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने सतर्क रहनु होला